I-Kdenlive 20.04 yazisa ngeendlela ezintsha zokuhlela | Ubunlog
I-Kdenlive 20.04 yazisa ngeendlela ezintsha zokuhlela, ukumakisha kunye nomfanekiso omtsha wokuqalisa
Izolo ibilusuku olubalulekileyo kubasebenzisi baka-Ubuntu - usapho olusungulwe Indawo ekugxilwe kuyo, ehambelana neenguqulelo zeLTS zamva zonke zazo iincasa ezisemthethweni. Ngemini enye, i KDE yayicwangciselwe ukukhutshwa Izicelo ze-20.04 ze KDE, Wenza njalo. Ukukhutshwa okutsha akufikeleli kwiindawo zokugcina ezisemthethweni, abakafiki nakwii-Backports okwangoku, kodwa sinezinye ezikhoyo Kdenlive 20.04 ngeendlela ezahlukeneyo njengeAppImage.
I-Kdenlive 20.04 kukukhutshwa kokuqala kolu ngcelele, oko kuthetha ukuba ingenise amanqaku amaninzi. Phakathi kwazo, ezinye zigqamile eziza kwenza ukuhlelwa kwevidiyo kube lula, kodwa ziye zalungisa iimpazamo ukuze ukusetyenziswa kwesicelo esidumileyo sokuhlelwa kwemultimedia kuthembeke kwaye kuzinzile. Apha ngezantsi unayo uluhlu lweendaba Amagqabantshintshi afikile ngeKdenlive 20.04.
1 I-Kdenlive 20.04 Iimbalasane
2 Ngoku iyafumaneka njenge-AppImage, iSnap kunye neFlatpak
I-Kdenlive 20.04 Iimbalasane
Isisombululo esitsha sokujonga kwangaphambili esikhawulezisa amava okuhlela ngokukhulisa isisombululo sevidiyo sabahloli bakho.
Iifilitha ezintsha zokumakisha iiklip ngeenkwenkwezi kunye nemibala. Ikwavumela ukuhluza ngohlobo kunye nezinye iindlela zokuhlela.
Amandla okubuyisela iziqwengana kuluhlu lweprojekthi.
Ukuhlelwa kweekhamera ezininzi ezahlukeneyo esivumela ukuba sikhethe umkhondo kumda wexesha ngokunqakraza kwiso projekthi.
Iqela lilungelelaniswe neziqwengana ezininzi kwisalathiso.
Umsebenzi we-Pitch offset xa utshintsha isantya sekliphu.
Yongeze inkxaso yokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kwifomathi ye-Pstrong ye-OTIO.
Isixhobo sokulandela umkhondo sifumene uphuculo oluninzi.
Ibha entsha enokusondezwa kwizakhelo.
Amaqela eziphumo abuyile.
Ukuthwebula kwakhona ngoku kukuvumela ukuba uhlele amanqaku ngaphambi kokuvala imilo. Shift + cofa kabini ukongeza inqaku elitsha, ukongeza / ukususa amanqaku ngokucofa kabini, cofa kabini umnqamlezo osembindini ukuze wenze ubungakanani kwakhona, yongeza ulawulo lobungakanani obuthe tye / ngokuthe nkqo
Umbala womboniso ngohlobo kumgca wexesha.
Ngoku singalahla iziqeshana ngqo kumda wexesha.
Ukujongwa kwakhona kobeko esweni, iprojekhini yomgqomo, umda wexesha, kunye nendawo yokudibanisa yeaudiyo.
Ukuqhawula: Ngoku sinokukhubaza ukucofa ngokucinezela isitshixo seShift ngelixa utsala, ucinezela iqhosha leShift xa usebenzisa isixhobo seSpacer ukukhubaza ukuthathwa.
Amandla okongeza imenyu kwintloko yethrekhi ukutshintsha phakathi kwezithonjana zeaudiyo yejelo kunye nejelo elahlukileyo.
Isikrini esitsha sokwamkela.
Ukunikezela ngeeprofayili: Ukongeza iiprofayili zomsindo ze-FLAC kunye ne-ALAC, i-VP8 entsha, i-VP9 kunye neeprofayili ze-alpha zevidiyo kunye nefayile ye-GIF yokuthumela imifanekiso.
Iindlela ezimfutshane: iShift entsha + indlela emfutshane yokuvula / ukucima ukulandela umkhondo weethagethi, yabela «g» indlela emfutshane ukongeza / ukususa isikhokelo, kongezwe indlela emfutshane F2 kwiProjekthi yeTray ukwenza igama elitsha.
Ukulungelelanisa amandla okusebenzisa iimonitha ezigcweleyo.
Umhleli weDVD osisigxina.
Ukukhetha ukubuyela umva komsindo (i-DirectSound, iWinMM, kunye neWasapi) ziye zongezwa kuhlobo lweWindows ukukhusela ukuqhekeka kwezinye iimeko.
Izinketho ezinje ngesixhobo sokucoca ulwelo olwenziweyo okanye iziphumo zeqela zibuyile.
Sincoma ukuya kwikhonkco le Inqaku lokukhupha ubuncinci ukubona imifanekiso kunye nemizekelo ye-GIF yemisebenzi emininzi ekhankanywe apha ngasentla.
Ngoku iyafumaneka njenge-AppImage, iSnap kunye neFlatpak
Kdenlive 20.04.0 ngoku iyafumaneka, kodwa okwangoku kuphela ngeLinux. Enye inkqubo exhaswa ngokusesikweni yiWindows, kodwa kusafuneka bayilayishe. Kukho indlela yokuyisebenzisa kwi-macOS, kodwa kuphela kubasebenzisi abaphambili, kuba i-KDE ayikhathaleli ukuyazisa inkqubo ye-Apple. Ngexesha loku kubhalwa iyafumaneka njengephakheji. snap, njengoko AppImage Kwaye njengephakheji Flatpak.
Siyakhumbula ukuba ukuze sisebenzise le kunye nayiphi na ipakethe yePlppak ku-Ubuntu nakwiziphumo, kufuneka kuqala senze inkxaso, into esiyichazileyo kwinqaku lethu Uyifaka njani iPappak kwi-Ubuntu kwaye sizivulele kwilizwe elinokwenzeka. Kwiiyure ezimbalwa ezizayo, iKdenlive 20.04 kunye nezinye iZicelo ze-KDE 20.04 ziya kuza kuVumbulula amaqela Wongeze i Indawo yokugcina izinto ezingasemva isuka kwi KDE.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » I-Kdenlive 20.04 yazisa ngeendlela ezintsha zokuhlela, ukumakisha kunye nomfanekiso omtsha wokuqalisa
Ndiphele ndikrakra kakhulu malunga ne-kdenlive… ayilinganisi kwaye uchitha ixesha elininzi usombulula iimpazamo kunye nokuvalwa ngequbuliso kunokuvelisa.
Ngethamsanqa ikhona kwiCinelerra GG linux, lo ngumhleli ekuvumela ukuba usebenze ngobungcali. Uzinzile njengelitye.
JClic, iphakheji yemfundo efumaneka kwiFlatpak
Izinto oza kuzenza emva kokufaka Ubuntu 20.04 LTS